Madinda Ndlovu: Sokumele Abafana Bethu Behlola Ukwenzela Ukuthi Banqobe Amanye Amaqembu
Umqeqetshi weqembu lenguqu ele Highlanders, uMadinda Ndlovu, uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwenzi.
Ekhuluma lentathelizindaba zemidlalo ngoLwesine, uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane kodwa sekumele bekunazelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu yikho kumele bakubone ukuba lumdlalo akusiwo wabafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
“Yebo na ye sibumba iqembu lakusasa kodwa kumele sibone ukuthi siyasuka lapho esiqale khona sibe kwesinye isigaba okwamanje. Mina ngiyazi futhi ukuthi imidlalo efana lalo owe CAPS United wenza abafana babe lamadlabuzane. Lizakhumbula ukuba abafana laba bake babagijimisa abe CAPS United ekuqaleni komnyaka njalo ngilethemba lokuba bazayiphinda futhi.”
Iqembu le Highlanders lele CAPS United azangqikilana ngeSonto enkundleni yeBarbourfields kodwa imidlalo yeviki letshumi lambili eyesigaba se Castle Lager Premier Soccer League izaqala ngoMgqibelo lapho iqembu leNichrut elizemukela khona ele Bulawayo Chiefs enkundleni yeAscot, iqembu le Chicken Inn lizadibana lele Harare City ngase Luveve, iqembu le Ngezi Platinum lizadlala lele Bulawayo City kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana lele Yadah ngase Nyamhunga.
Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le Shabanie Mine lizadlala lele Chapungu enkundleni yeMaglas, iqembu le Dynamos lizemukela ele FC Platinum ngase Rufaro, iqembu le Triangle lizadlala lele Black Rhinos ngase Gibbo kuthi iqembu le Mutare City Rover lizatshayana lele Herentals enkundleni yeVengere.